याै:नसम्पर्क राख्नेवित्तिकै पुरुष निदाएपछि महिलाहरुमा पर्छ यस्ताे असर – Halkhabar kura
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०१:०२
याै:नसम्पर्क राख्नेवित्तिकै पुरुष निदाएपछि महिलाहरुमा पर्छ यस्ताे असर
महिला र पुरुषबीच यौ नसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ ।
सम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् ।
तर, के वास्तवमै सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ?
सामान्यतयाः रातको समयमा सम्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, सम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।सम्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको शरीरमा भिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उ’त्तेजि’त हुन्छ र महिलाहरु सम्बन्धपछि झन् बढी पुरुषको मायामा पर्छन् ।
अध्ययनले पार्टनरबीच हुने कुराकानीका क्रममा जो ‘हामी’ शब्दको प्रयोग गर्छन् ति व्यक्तिहरु निकै खुशी भएको पाइयो । वास्तवमा ‘हामी’ शब्दको प्रयोग गर्नेहरु एक–अर्काप्रति समर्पित हुने र हरेक पलमा साथ दिने गर्छन् । उनीहरु आफ्ना पार्टनरको ख्याल राख्ने गर्छन् । उनीहरु एक–अर्कालाई पाएकोमा खुशी महसुस गर्छन् र सम्बन्धमा मिठोपन्् आउँछ ।
अण्डा सबैलाई मनपर्ने एक पौष्टिक आहार हो । यसमा भएका पौष्टिक पदार्थले मानिसको स्वास्थमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यसमा पाइने बेटाइन र कोलीनले मुटु रोगीहरुका लागि धेरै फाइदाजनक हुने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । चीनमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार दिनमा एउटा अण्डा खाएमा मुटु रोग र स्ट्रोकको खतरा कम हुन सक्छ । उचीत रुपमा अण्डाको सेवन गर्दा स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । अण्डालाई हिजोआज सुपरफूड्सको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
तसर्थ, अण्डा खानुको अन्य थुप्रै फाइदाहरू छन्, तर अण्डा खाएपछि फ्याँकिएको बोक्राहरुको जीवनमा धेरै उपयोगी हुन्छन् । यसलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्दा निकै लाभदायक हुन्छ। यस्ता छन् जन्नैपर्ने अण्डाको बोक्राको फाइदाहरु :
१. बोक्रामा पाइने क्याल्सियम : सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, अण्डाको बोक्रामा क्याल्सियम कसरी पाइन्छ भनेर । तर वास्तवमा अण्डाको बोक्राबाट क्याल्सियम प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसका लागि अण्डाको बोक्रालाई राम्रोसँग तातो पानीले धोएर घाममा सुकाउने, त्यसपछि त्यस सुकेको बोक्रालाई धुलो बनाउने गरि पिसेर हावा नछिर्ने बट्टामा राखी दैनिकरुपमा प्रयोग गर्दा उच्चतम क्याल्सियम पाउन सकिन्छ।
२. कपडाको चमक बढाउने : अण्डाको बोक्रा वा खोलले कपडालाई नयाँ राख्न मद्दत गर्दछ। अण्डाको खोलबाट बनाइएको पाउडर वा धुलोलाई एक बाल्टिन पानीमा २ चम्चा अण्डाको पाउडर हालेर रातभर राखेर भोलिपल्ट कपडा धुँदा यस पानीको प्रयोग गरियो भने कपडाको चमक बढाउन र कपडालाई नयाँ राख्न मद्दत गर्दछ।
३. किटनासकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने : प्राय घरको करेसाबारीमा थुप्रै फल तथा सब्जीहरु लगाइएको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा यी फलफुल तथा तरकारीमा किरा लगेर यिनीहरुलाई राम्रोसँग फल्न दिँदैन। यदि अण्डाको खोललाई टुक्रा पारेर करेसाबारीमा चारैतिर छर्ने हो भने यसले किराहरूलाई फलफूल र तरकारीबाट टाढा राख्नसकिन्छ ।
४. छालाको ड्राईनेस कमगर्न उपयोगी : अण्डाको खोलले अनुहारको र साथै छाला सम्बन्धि समस्या पनि निर्मुल गर्दछ। यसको लागि अण्डाको बोक्रालाई एप्पल भिनेगरमा केहि दिन राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि छाला पोलेको अनुभव भएमा जहाँ समस्या देखापर्छ त्यहाँ लगाएमा छाला पोल्ने समस्या हराएर जान्छ। साथै, अण्डाको बोक्राको धुलो वा पाउडरलाई काँचो अण्डामा मिलाएर अनुहारमा लेप लगाएमा अनुहार ताजा वा फ्रेस देखिनुका साथै यसले छालामा हुने ड्राईनेस पनि चाँडै कम गर्दछ।
५. अनुहारको दागहरू कमगर्न मद्दत गर्छ : अण्डाको बोक्राबाट बनेको पाउडरमा कागतीको रस मिसाएर अनुहारमा लगाएमा अनुहारको दागहरु कम हुनुका साथै यसले छालाको संक्रमणको जोखिम पनि कम गर्दछ। त्यसैगरि, अण्डाको पाउडरमा थोरै चिनी मिसाई लेप तयार गरेर हप्ताको एक वा दुइ दिन अनुहारमा लाउँदा अनुहारको चमक बढाउनुको साथै अनुहारलाई ताजा राख्दछ।
६. दाँतलाई प्राकृतिक सेतो राख्न मद्दत गर्दछ : यदि कसैको दाँतमा अत्याधिक पहेंलोपन छ भने अण्डाको पाउडरद्वारा नियमित रूपमा दाँत मसाज गरेमा दाँतको प्राकृतिकरुपमा सेता देखिने गर्दछ।
Previous बालिका र महिलाको यौन भिडिओ बेच्ने गिरोहको नाइकेलाई ४० वर्ष जेल
Next हलिउडका एक्ला नेपाली हिरो “सन्नी केसी” (भिडियोसहित)